Home Wararka Ku Guuleysashada Qabshada Doorashada 2021 ee RW Rooble Waa u Guul Dalka...
Ku Guuleysashada Qabshada Doorashada 2021 ee RW Rooble Waa u Guul Dalka oo Dhan u soo Hoyaneysa.
Iyadoo cid waliba ay marqaati ka tahay xaaladda khatarta ah ee aynuu soo marnay maalmihii dhowaa ayaa hadda waxaa muuqda iftiin weyn oo cid waliba ku faraxday. Gadoodka Ciidanka , furista waddooyinka xeran, Barakaca, Qaxa, dhimashada iyo Dacdarrada hooyooyinka iyo Caruuraha caasimadda ka jirtaa waxaa soo afjari kara in dalka uu degdeg doorasho uga qabto RW Rooble.
M. Farmajo ayaa waxaa uu ugu dambeyn ogolaaday inuu doorashada iyo amniga la xiriira arrimahaas uu ku wareejiyo RW Rooble, si loo qabto doorasho ku saleysan 17ka Setember 2021. Farmajo oo hortagay golaha shacbiga ee waqtigooda dhacay balsa u sii jooga si boos buuxis ah ayaa sheegay inuu ku noqonayo 17 Setember maadaama laga diiday inuu aado doorashadii uu sheegsheegayey ee qof iyo Cod taas oo runtii cid waliba ay ogtahay inaysan dalka ka suuragaleyn xelligaan.
Haddaba mar haddii la soo helay furihii lumay ee doorashada maxaa la gudboon dhamaan dhinacyada doorashada daneynaya in la’aado waa taageero buuxda oo ay u fidiyaan RW Rooble.
Mucaaridka oo ah kuwa ka gaaray guusha weyn halkaan, ayaa waxaa laga rabaa inay ka shaqeeyaan sidii doorashada ay ugu dhici lahayd si habsami ah, si taas loo suurageliyana waxaa laga rabaa:
In joojiyaan dhammaan erayada xanafta leh iyo kuwa xasarad abuuri kara maadaama dalka aysan dan ugu jirin inuu hadda galo dagaal siyaadeed mid ciidan iskaba dhaafe iyo In ay RW Rooble gacan buuxda oo daacad ah ku siiyaan sidii uu uga mira dhalin lahaa in ay dalka doorasho ka dhacdo sida ugu dhaqsaha badan.
In halkaas lagu joojiyo weerrada afka ah ee lagu qaadayo M. Farmajo iyo kooxdiisa maadaama ay hawshii doorashad uu Farmajo soo wareejiyey, taas oo ah runtii Tanazul weyn oo uu sameeyey sabab kasta ha ku timaadee.
In Xildhibaanada dalka ay u hawla galaan hadda kadib inay isu diyaariyaan sidii ay kuraastooda ugu so noqon lahaayeen ammaankana ilaaliyaan oo aysan isticmaalin erayo xanafle.
Maxaa laga rabaa RW dalka inuu sameeyo?
Inuu ku kal soonaado inuu samatabixin karo dalkaan oo uu haysto dhammaan wixii loogu baahnaa inuu dalka doorasho aado waa inuu u cadaalada falo dhamaan kooxaha siyaasadda isku haysata oo uu Farmajo ku jiro.
Inuusan noqon mid wax kala qarsanaya ee waa inuu shacbiga Somaliyeed si toos ula wadaagaa hawlaha uu qabanayo ee doorashada ku aadan si dadku ay u arkaan ciidda Doorashada carqaladeyneysa. Taas oo ah in Saxaafadda iyo Ururaada bulshada ay la socdaan geedisocodka hawlaha doorashada si daka Somaliyeed taageeradooda loo helo.
M. Farmajo waxaa uu qaatay tallaabo geesinimo leh oo ku wareejiyey hawlaha doorashada RW dalka kadib markii ay u muuqatay inay isa soo xereen albaabada doorashadii uu sheegay inuu rabay, waa in lagu amaanaa.
M. Farmajo waa Inuu caddeeyo si degdeg ah inuu yahay Murashax oo uu doonaya inuu u tartamo kurisga Mar kale, taas oo keeneysa inuusan wax talo ah ku yeelan hawlaha doorashada ama inuusan murashax ahayn balsa uu rabo inay dalka ka dhacdo doorasho caddaalad ah oo uu si nadiif ah oo daah furan dusha uga eego sida wax u soconayaan isagoon wax hagardaamo ah aan u geysan, si taariikhda ay ugu gasho berrina uu ulu soo noon karo.
Dadka Somaliyeed ha ka fekeraan sidii looga gudbi lahaa xaaladahii adkaa ee la soo maray hana u jiheystaan in doorasho xalaal ah oo aan wax dhib lahayn inay dalka ka dhacdo. Hana loo duceeyo dalka iyo RW Rooble inuu rabbi u fududeeyo waddada xaqa iyo caddaaladda.